Puntland oo Odayaasha Gaalkacyo ku eedeysay inay la shaqeeyaan Al-Shabaab | Banaadir Times
HomeUncategorisedPuntland oo Odayaasha Gaalkacyo ku eedeysay inay la shaqeeyaan Al-Shabaab
Puntland oo Odayaasha Gaalkacyo ku eedeysay inay la shaqeeyaan Al-Shabaab
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan dhamancad ayaa ku Eedeyay Odayaasha dhaqanka ku nool Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta gobolka Mudug inay la Shaqeeyaan Ururka Al-Shabaab, isla markaana ay cadeyn u hayaan.
Wasiirka oo Wareysi gaar ah siiyay Warbaahinta Daljir oo ka tirsan Ururka SOMA ayaa sheegay in la dhageystay qaar kamid ah taleefoonada Odayaasha Dhaqanka, isla markaana ay ka Shaqeynayaan in Al-Shabaab Xarumo ka furtaan magaalada Gaalkacyo si amaradooda uga fulaan.
Waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in xukuumadda Madaxweyne Deni dadaal farabadan oo ay bixisay ay sababtay in laga hortago khataraha Ururada Al-Shabaab & Daacish ee ahaa inay Xafiisyo ka furtaan Gaalkacyo & Boosaaso.
Hadalka Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan dhamancad ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli dhawaan uu la kulmay Odayaasha dhaqanka Gaalkacyo, isla markaana Odayaasha ay xukuumadda Puntland wax ka qaban xaaladaha kajira Gobolka Mudug.
Previous articleBooliska Hir-Shabeelle oo gacanta ku dhigay maandooriye & dadkii ka Ganacsanayay
Next articleDowladda Soomaaliya oo eedeyn kulul u jeedisay Dowladda Kenya